भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुँदा नेपालमा किन महँगो ?
- नेपाली सन्देश सोमवार, जेष्ठ २१, २०७५ , 9.1K जनाले हेर्नुभयो
नेपालको एक मात्र पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातक भारतमा एकसाता अघिदेखि तेलको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको छ । भारतमा बितेको साताको पाँच दिनमा मात्रै पेट्रोलको मूल्यमा ३४ पैसा घट्यो । यही आइताबार भारतीय आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य १० पैसा घटायो ।
नेपालमा शनिबार मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपाल आयल निगमले बढाएको थियो। आयल निगमको सञ्चालक समिति बैठकले शनिबार राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा ३-३ रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो।
त्यसैगरी हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ पाँच रुपैयाँ बढेको आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । मूल्य बढेसँगै अब पेट्रोल प्रतिलिटर ११३ रुपैयाँ पुगेको छ। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य भने ९५ रुपैयाँ पर्छ। भारतीय आयल कर्पोरेशनले शुक्रबार नयाँ मूल्यसूची पठाएपछि निगमले मूल्य समायोजन गरेको प्रवक्ता गोइतको भनाइ छ। खाना पकाउने ग्यासको भने मूल्य बढेको छैन।
भारतीय बजारमा अन्‍तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रणाली अनुसार दिनदिनै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तलमाथि भइरहन्छ । भारतीय आयल निगमले हरेक महिनाको दुई पटक नेपाल आयल निगमलाई मूल्यसूची पठाउँछ । उसले हरेक महिनाको १ तारिखदेखि १५ सम्मको मूल्य विश्लेषणसहितको सूची एक पटक र १६ तारिखदेखि महिनाको अन्तिमसम्मको मूल्यसूची अर्को पटक पठाउँछ ।
भारतले मे अन्तिममा पठाएको मूल्य विश्लेषण सूचीमा त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको थियो । यसभन्दा अघि मे १४ देखि २८ सम्म भारतमा तेलको मूल्य लगातार उकालो लागेको थियो । त्यसक्रममा भारतमा पेट्रोल करिब ४ रुपैयाँ र डिजेल ३.६२ रुपैयाँसम्म महँगो भएको थियो ।
नेपालमा अहिले भारतले मे १५ देखि अन्तिमसम्का लागि पठाएको मूल्यसूची अनुसार आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बजारमा पठाइरहेको छ। भारतीय बजारमा दैनिक मूल्यमा घटबढ भए पनि नेपालमा प्रत्येक १५ दिनमा मात्रै मूल्य तलमाथि हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा भारतीय आयल निगमले मे १५ देखि अन्तिमसम्म पठाएको सूचीअनुसार नेपाल आयल निगमले पनि शनिबार मध्यरातिदेखि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३/३ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो ।
किन हुन्छ भारततर्फ तस्करी ?
नेपाल-भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार दुवै देशमा पेट्रोलियमको भाउमा धेरै अन्तर राख्न पाइन्न । नेपालमा प्रत्येक १५ दिनमा मात्रै मूल्यमा हेरफेर हुँदा भारतमा दैनिक मूल्य तलमाथि भइरहन्छ ।
यस्तो अवस्थामा भारतमा महँगो भएको तेल नेपालमा सस्तो पर्ने गर्छ । खुला सिमानाका कारण तेलको तस्करी भारततर्फ हुने गरेको छ । भारतले नाफामा र नेपालले सहुलियत दिएर सस्तो मुल्य बनाउँदा नेपालबाट तेल तस्करी भएर भारत जाने गरेको छ ।
नेपालमा दैनिक माग भन्दा धेरै तेल खपत हुने गरेको छ । नेपाल सरकारको अनुदानको तेल भारतीयले किनेर सीमापारि तस्करी गर्ने गरेका छन् । नेपाली बजारमा भारतमा भन्दा केही महँगो हुनेबित्तिकै भारततर्फ तेल तस्करी रोकिन सक्छ । यो मूल्य समायोजनपछि भारतमा भन्दा नेपालमा तेल महँगो हुन्छ र सीमापारि तस्करी पनि नियन्त्रण हुन्छ ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली
तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारको पालामा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका राप्रपा नेता सुनिलकुमार थापाले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेका थिए । तर विद्यार्थी स‌ंगठन र उपभोक्ताको आन्दोलन तथा निर्वाचनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको स्वाचलित मूल्य समायोजन प्रणाली रोकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनका बेला जनताको विरोध बढ्ने भन्दै स्वचालित मूल्यप्रणाली अनुसार बढाइएको मूल्य फिर्ता गराएका थिए ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्णरुपमा लागू हुन नसक्दा निगम अहिले पनि घाटामा छ । नेपाल र भारतबीचको पेट्रोलियम सम्झौतामा ठुलो अन्तरको मूल्य राख्न नपाइने भएकाले भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुने गरेको छ । जसले गर्दा नेपालमा सस्तोमा किनेर महं‌गोमा बेच्न भारततर्फ पेट्रोलियम तस्करी हुने गरेको छ ।
कति छ घाटा ?
शनिबार भएको मूल्य वृद्धिपछि समेत निगमलाई अझै १५ दिनको घाटा १८ करोड ६२ लाख रहेको प्रवक्ता गोइतले जानकारी दिए। निगमले यो घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य पाँच रुपैयाँ बढाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिहजार लिटर ७५ डलर बढाएको छ।
नेपालमा शनिबार रातिबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहँदा भारतले आइतबर बिहानै मूल्य घटायो । आइतबारबाटै भारमा पेट्रोल १० पैसा सस्तो भयो । भारतमा गत साताको पाँचदिनमा पेट्रोलको मूल्य ३४ पैसासम्म घट्याे ।
डिजेलको भाउ भने भारतले यथावत् राखेको छ। भारतको मुम्बईमा पेट्रोल ८५.९२ र डिजेल ७३.५८ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । दिल्लीमा सबैभन्दा सस्तो ७८.११ रुपैयाँमा पेट्रोल किनबेच भइरहेको छ ।
त्यसैगरी डिजेलको मूल्य पनि दिल्लीमा सबैभन्दा सस्तो छ । त्यहाँ ६९.११ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा डिजेल बिक्री भइरहेको छ भने मुम्बईमा सबैभन्दा महँगो ७३.५८ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।
यसभन्दा अघि १४ देखि २८ मेसम्म भारतमा तेलको भाउ लगातार उक्लिएको थियो । यस क्रममा पेट्रोल करिब ४ रुपैयाँ र डिजेल ३.६२ रुपैयाँसम्म महँगो भएको थियो ।
भारतमा घटेको पेट्रोलियमको मूल्यसूची अब १५ जुनमा मात्रै भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल निगमलाई पठाउँछ । त्यही मूल्य विश्लेषणका आधारमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने या घटाउने निधो गर्नेछ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको पनि मूल्य घटिरहेकाले आगामी जुन १६ देखि नेपालमा पनि तेलको मूल्यमा गिरावट आउन सक्छ ।
कच्चा तेल पनि ओरालो
विश्व बजारमा अहिले कच्चा तेलको भाउमा गिरावट आएको छ । मे ३० का दिन ६८.३३ डलर प्रतिब्यारल पुगेको कच्चा तेलको भाउ शुक्रबारसम्म घटेर ६५.६६ डलर प्रतिब्यारलमा झरेको छ ।
यही दरका कारण भारतमा पनि स्वत: तेलको भाउ घटेको छ । विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ घट्दा नेपालमा भने तत्कालै असर पर्दैन । नेपालले भारतबाट मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ, त्यो पनि प्रत्येक १५ दिनमा पठाइने मूल्यसूची अनुसार ।
शुक्रबार दुई सातायताको सबैभन्दा तल अर्थात् प्रतिब्यारल ६५.६६ रुपैयाँमा कच्चा तेलको किनबेच भइरहँदा नेपालमा भने दुई साता अगाडिकै (भारतमा मे १५ देखि मे अन्तिमसम्म) मूल्य अनुसार शनिबार मध्यरातिदेखि भाउ बढाइयो ।
नेपालमा पेट्रोल डिजेलको भाउ बढ्दा सार्वजनिक यातायातको भाडा त बढेको छैन तर हवाई यातायातको भने भाडा आइतबारदेखि नै ह्वात्तै बढिसकेको छ । नेपाल आयल निगमले भारतीय बजारमा कायम हुने भाउका आधारमा नेपालमा पनि मूल्य घटबढ हुने जनाउँदै आएको छ ।
वाम सरकार आएदेखि अहिलेसम्म पाँचौ पटक मूल्य बढेको छ। अर्थात्, ८५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पाइने पेट्रोलको भाउ बढेर अहिले ११३ रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
निगमले अझै पनि घाटापूर्ति हुन नसकेको तर्क गर्दै आएको छ । शनिबार मध्यरातिदेखि मूल्य बढाउँदा पनि निगमलाई अझै १५ दिनको घाटा १८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको निगमका प्रवक्ता गोइत बताउँछन् ।